Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Airlines » Iphupho elibi le-PR: I-Emirates iphoqa abasebenzi bayo basendizeni ukuthi behlise isisindo
'Uhlelo Lokuphathwa Kokubukeka,' luholwa izikhulu zezithombe eziqinisekisa ukuthi i-Emirates, edume ngezinga layo eliphezulu neqoqo lezindiza zesimanje, iphila ngokuvumelana nesithunzi sayo “esihle”.
Ababeyizikhonzi zendiza yase-Emirates baveze kwabezindaba ukuthi inkampani yezindiza iphoqa abasebenzi be-cabin ukuthi behlise isisindo, ngaleyo ndlela idale iphupho elibi le-PR Dubai-inkampani yenethiwekhi.
Ngokwalabo ababengabasebenzi base-Emirates, ukuqapha isisindo ngokusobala bekungaphansi kwe-'Appearance Management Programme,' eholwa izikhulu zezithombe eziqinisekisa ukuthi i-Emirates, edume ngezinga layo eliphezulu neqoqo lezindiza zesimanje, iphila ngokuvumelana nesithunzi sayo “esihle”.
UKarla Bayson, 36, oshiye inkampani yezindiza ngo-2021 esechithe iminyaka eyisishiyagalolunye naye Emirates, utshele i-Insider ukuthi ubone abanye ozakwabo bethola izexwayiso ngesisindo sabo. Utshele isitolo ukuthi abasebenza endizeni banikezwa amasonto amabili ukuthi behlise isisindo ngaphambi kokuthi "bahlolwe" futhi ngabaqaphi.
Omunye owake wasebenza, uMaya Dukaric, uthe labo abazibiza “ngamaphoyisa esisindo” kwesinye isikhathi bebemisa izisebenzi ezikhungweni zezindiza bathi “Hey, babe. Kumele wehlise ijubane.”
Omunye owake waba nguzakwethu ebhizinisini lakwa-HR, ongathandanga ukudalulwa igama, uthe abasebenzi bazoze bancishwe amaholo uma bengakwazi ukukhipha amapondo adingekayo.
Baphakamise ukuthi cishe abantu “abangu-150 kwabangu-25,000” ababesohlelweni lokuqapha isisindo nganoma yisiphi isikhathi, bengeza ngokuthi “umkhuba wokutshelana kubaphathi udlangile.”
Lezi zindaba ziza ngemuva kokuthi osebenza endizeni uDuygu Karaman esanda kuthi wayeka umsebenzi esegadwe iminyaka emithathu ngemuva kokuthi uzakwabo ongaziwa ekhale ngokuthi “usinda kakhulu.” Karaman, owachitha iminyaka engu-10 e Emirates, uthe wafakwa ohlelweni lokulawula isisindo ngoba weqe ngo-2 kilogram.
“Bakunikeza ipheshana elingu-A4 elisanda kuthi: “Ungalidli irayisi, ungadli isinkwa,” uKaraman etshela iThe Mirror. “Bekuyizinto wonke umuntu azaziyo njengokulala njalo, engingakwazi ukukwenza ngenxa yomsebenzi,” wengeza.
Isisebenzi sasendizeni sithe sizodonswa ukuze kuhlolwe isisindo ngaso sonke isikhathi ngaphambi kokundiza nakuba enosayizi 12 futhi enesisindo esingamakhilogremu angu-147 kuphela.
Idatha Entsha Yokuhlasela Umdlavuza Ngokuhlela kabusha Amasosha omzimba
Ikhondomu Lokuqala Lokuhlangana Endunu